LAYAAB: Ronaldo oo Tartankan dhan ciyaaray isagoo xiran Xafaayad, kuna guuleystay Gooldhalintii tartankaasi!! – Gool FM
Haaruun August 5, 2021
(Brasilia) 05 Agoosto 2021. Warbixintaan waxa aan ku eegeynaa sheeko cajiib ah oo ku saabsan sababtii ku kalliftay weeraryahankii hore ee xulka Qaranka Brazil Ronaldo in uu xulkiisa u ciyaaray tartan caalami ah isagoo xirnaa xafaayad.
Ronaldo Luis Nazario waxaa loo aqoonsan yahay in uu ka mid yahay dhaliyeyaashii ugu fiicnaa ee soo maray taariikhda kubadda cagta, isagoo u soo ciyaaray Kooxo fara badan iyo dabcan xulka qaranka Brazil oo uu kula guuleystay 2 Koob Adduun (1994 USA, 2002 Korea/Japan), Copa America (1997 Bolivia, 1999 Paraguay) iyo Koobkii Confederations ee 1997-kii lagu qabtay Sucuudiga, haddana sidaas oo ay tahay Ronaldo waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda uu jirkoodu dulmiyay oo haddii uu caafimaad qabi lahaa, dhaawacyana aysan soo gaari lahayn uu dhigi kari lahaa rikoor ka wanaagsan midka haatan magiciisa ku qoran.
Haddii aan u soo noqonno qisadeenna maanta waxa ay ku saabsan tahay mar uu Ronaldo (El Fenomeno) uu ka qayb galayay Koobkii Ameerika ee 1999-kii lagu qabtay waddanka Paraguay, kaas oo ay markoodii 6-aad ku guuleysteen xulka Brazil, waxaana Ronaldo berigaasi si lama filaan ah u soo food saartay arrin yaab oo ah in miisaankiisa ama culeyskiisu u kordhayay si deg deg ah, taas oo ku keentay gaabis dhanka kubadda cagta ah oo laga dareemay xerada tababarka xulka qaranka Brazil.
Tababarihii hore ee xulka Brazil ee Vanderlei Luxemburgo ayaa mar uu u warramayay Jariiradda Marca ee ka soo baxa Spain waxa uu sheegay in weeraryahan Ronaldo 9 uu Koobkii Ameerika 1999-kii ciyaarayay isagoo ay u xirnayd xafaayadda saxarada iyo kaadida celisa.
Ronaldo ayaa markii uu dhimi kari waayay miisaankiisa waxa uu tababarihii hore ee xulka Brazil ka codsaday dhaqaatiirta xulka inay arrintaasi soo fara geliyaan oo ay deg deg wax uga qabtaan, intaa kaddib waxaa Ronaldo ay dhaqaatiirtu u qoreen Kaniiniga Xenical Orlistat kaas oo looga hor tago cayilka, laakiin daawadan ayaa waxay leedahay dhibaatooyin ay ka mid tahay calool barar iyo saxarada oo jilicda, mararka qaarna aad adigu xakeyn kari wayso, sidaa awgeed Ronaldo ayaa jaceyl uu u qabo Brazil iyo ciyaarista Koobka Ameerika waxa uu ku qasbanaaday inuu xirto Xafaayad ama Pampers, si uusan tartankaasi u seegin, isla markaana isagoo kubadda ciyaaraya uusan fadeexad ula kulmin.
Xafaayaddaasi uu tartankaa oo idil ku ciyaarayay Ronaldo ma waxbay u dhintay?
Maya, sababtoo ah Ronaldo waxa uu noqday xidiggii ugu goolasha badnaa Koobkii Ameerika 1999-kii, isagoo dhaliyay 5 gool, halka xulkiisa qaranka Brazilna ay ku guuleysteen Koobkaasi.
Laakiin ciladdii kama aysan istaagin Ronaldo, waxaana si xad dhaaf ah u kordhayay miisaankiisii, taas oo qayb ka ahayd sababihii ku kallifay inuu sii wadi kari waayo cayaaraha kubadda cagta.
Waa xaqiiqo in Ronaldo 21 sano ka hor dhaawicii jilibka ka soo gaaray xilligii uu u ciyaarayay kooxda Inter uu ahaa mid gaabis weyn geliyay xirfaddiisa ciyaareed ayaa haddana xiddigani labada jeer ku guuleystay kubadda dahabka ah ee Ballon d’Or markii uu ka fariistay ciyaaraha waxa uu tilmaamay in cayilka ama buurnaanta saa’idka ah ay sabab u noqotay inuu sagootiyo garoomada kubadda cagta.
“Dawada waxaan qaadannaa kolka aan xanuunsannahay ama marka uu dhaawac na soo gaaro, laakiin in jirkaaga quruxdiisa lagu ilaaliyo waa arrin kale, dad fara badan oo haatan horteyda fadhiya ayaa ka qoomameyn doona sidii ay ugu jees jeesi jireen cayilkayga ama miisaankayga, anigu cidna xaasid kuma ihi, laakiin waxaan doonayay in aan arrintaa caddeeyo maalinta ugu dambeysa ee waayeheyga ciyaareed oo maanta ah.” ayuu yiri Ronaldo mar uu bishii Febraayo ee sanadkii 2011-kii ku dhawaaqayay inuu ka fariistay ciyaaraha kubadda cagta.
Ronaldo oo 18 sanadood ciyaarayay kubadda cagta ayaa waxa uu xusay in dhaawacyadii faraha badnaa ee soo gaaray ay uga darneyd dawooyinkii ay dhaqaatiirtu siin jireen kuwaas oo u horseeday baruur uu illaa maanta dhibane u yahay.
Intaas waxaan ku soo koobaynaa qisadii yaabka lahayd ee ku saabsanayd weeraryahankii hore ee reer Brazil Ronaldo oo haatan ka hor dantu ku qasabtay in uu xirto xafaayad ama Pampers, isagoo xafaayad xiranna ku guuleystay Koobkii Latin Amerika ee sanadkii 1999-kii iyo abaal-marinta xiddigii ugu goolasha badnaa tartankaasi.